१२ दिनमै कोरोनालाई जितेका सांसद यादव भन्छन् - दैनिक दुईवटा प्याज, २२ केसरा लसुन, बेसार खाए Canada Nepal
Sep 27 2020 | २०७७, आश्विन ११गते
२०७७, आश्विन ११गते
कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक खोल्यो सेनाले, सफाइ गर्ने काम एक दुई दिनमै सकिने
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा कोरोनाको खोप पत्ता लागेमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दबाब
पानीमा मात्र बस्ने अनौठो भालु, जुन अन्तरिक्षमा पनि बाच्न सक्छ !
सशस्त्र प्रहरी जवान खोलामा मृत फेला
मेलिना राईको गीतमा अभिनेता ध्रूब दत्त र निरु कोइरालाको रोमान्स
६५ देशका राष्ट्रगान गाउन जानेका यी नेपाली
बलिउड ड्रग्स प्रकरण : एनसीबीले लियो दीपिकाको बयान, ड्रग्स च्याट बारे बोलीन्
१२ दिनमै कोरोनालाई जितेका सांसद यादव भन्छन् - दैनिक दुईवटा प्याज, २२ केसरा लसुन, बेसार खाए
क्यानाडानेपाल डेस्क श्रावण २७ २०७७
काठमाडौं । संघीय सांसद प्रदीप यादवले कोरोनाभाइरसलाई जितेका छन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा बसेका यादवको पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । उनले १२ दिनमै कोरोनालाई जित्न सफल भएका हुन् ।
उनले मंगलबार आफ्नो दास्रो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका हुन् । उनले घरमै आत्मअनुशासन क़ायम गरि सुरक्षित रूपले बसी डाक्टरको सल्लाह अनुसार गरेर कोरोनालाई जित्न सफल भएको बताएका छन् ।
उनले आफु अझै ७ दिन घरमै बस्ने बताएका छन् । उनले दैनिक दुईवटा प्याज, २२ केसरा लसुन, आधा चम्चा बेसार, एउटा कागती, कालो खुर्सानी र बिरेनुन मिक्सरमा पिसेर हरेक दिन तीनपटक खाएको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले कोरोनालाई जित्नको लागि आफुले दैनिक तीन गिलास मह, कागती पानी खाएको र बिहान बेलुका जगिङ्ग गरेको पनि बताएका छन् ।
उनले कोरोना जितेपछि सामाजिक संजालमा भनेका छन् - 'सामाजिक दुरी कायम गरौ अनावश्यक बाहिर नजाउ, मास्क र सनिटाईजर को प्रयोग गरौ, कोरोना लाग्दै मा भयभित न बनौ उच्चमनोबल राखी एकार्का प्रति माया सद्भाव राखेर स्वयम्अनुशासित भएर डाक्टरको सलाह बमोजीम नियमित कार्य गरौ ।'
उनी गएको १६ साउनमा वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालाको परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि भएपछि आफ्नै निवासमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् ।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार २२:२६:४२ बजे : प्रकाशित
# प्रदीप यादव
दार्चुला - नेपाली सेनाले व्यासको घाँटीबगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ । गत जेठ ९ गतेदेखि काम शुरु गरेको सेनाले ५५० मिटर बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो । भारतले सडक निर्माणका क्रममा घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध हुँदा व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएपछि सेनाले बाटो खोल्ने जिम्मा पाएको थियो ।
चार महिना बढी समय लगाएर सेनाले अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो । मौसम प्रतिकुल नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र सामान ढुवानीमै समय लागेका कारण ट्र्याक खुलाउने काम ढिलाइ भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताउनुभयो । “भिर फुटाएर ट्र्याक खुलाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सफाइ गर्ने काम एक दुई दिनभित्र सकिन्छ ।”
यो बाटो खुलेसँगै व्यासका बासिन्दालाई जोखिमपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा बाटो सहज भएको छ । व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दा कार्तिक महिनामा सदरमुकाम खलंगा कुञ्चा झर्ने गर्छन् । व्यासको छांगरुमा ११७ र तिंकरमा ८७ घरधुरीको बसोबास छ । चट्टानी भूगोलले केहि ढिलाइ भए पनि स्थानीयका लागि सहजरुपमा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण भएको व्यास–२ का बासिन्दा हरकसिंह कार्कीले बताउनुभयो । घाँटीबगरमा सेनाले बनाएको बाटोमा ट्र्याक राम्रो खुलेको र त्यो बाहेकका अन्य चार पाँच ठाउँमा पुनः बाटो अवरुद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो ।
घाँटीबगरमा सेना बसेको क्याम्पको तल ठूलो पहिरो गएको छ । त्यो क्षेत्रमा पनि आवतजावत गर्न निकै सास्ती भएको व्यासको तिंकर पुगेर खलंगा फर्किनुभएका कार्कीले जानकारी दिनुभयो । तलतिरको बाटो नखुलाएसम्म अहिले नै व्यासी कुञ्चा सर्न सक्दैनन् । तम्बाकुमा व्यास गाउँपालिकाको बजेटमार्फत बाटो खुलाउने काम भए पनि कडा चट्टानी भाग भएका कारण खुल्ने सम्भावना छैन् । यो क्षेत्रमा अहिले पनि तारको सहारामा चट्टानी भूभागमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै तम्बाकु नजिकको नयाँ निर्माण गरिएको बाटो सबै भत्किएको छ । कल्जुगाडमा झोलुंगे पूल बगाएको छ भने कल्जगाड भन्दा तल र माथि बाटो भत्किएको छ । सबै ठाउँमा बाटो निर्माण गर्न सके मात्र सहजरुपमा व्याससम्मको बाटो खुल्ने उहाँले बताउनुभयो । तम्बाकु भन्दा तलतिर बाटो नहुँदा व्यासबाट फर्किने भेडा व्यवसायी अहिले बुदिमै रोकिएका छन् ।
घोरेटो बाटो खुलाएको सेनाले लगत्तै सडक निर्माणको काम पनि थालनी गर्नेगरी तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । सेनाले दुई ठाउँमा क्याम्प राखेर सडक निर्माणको थालनी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परामर्शदातामार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।” सो सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम शुरु गरेको छ ।
सैनिक मुख्यालयका अनुसार मोटर बाटोको डिपीआर तयार पार्न विकास निर्माण गणबाट प्रमुख सेनानी रमेश गुरुङ्गको नेतृत्वमा सैनिक टोली गत साउन २३ गतेदेखि सदरमुकाम खलंगामा छ । महाकाली नदी किनारै किनार भएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । सडक निर्माण गर्न सके व्यासीको सपना पूरा हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको निकै सम्भावना छ । कैलाश पर्वत दर्शन, चीन सँगको व्यापार, अपिहिमाल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा पर्छन् । “अहिले बाटो नहुँदा छांगरु र तिंकरका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा आउन पाएका छैनन्, सदरमुकाममा रहेका त्यहाँका मानिस पनि गाउँ फर्किन पाएका छैनन्, चाँडो बाटो निर्माण भयो भने स्थानीयवासीलाई आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान सहज हुन्छ”, व्यास–१ का बासिन्दा जगदीशप्रताप ऐतवालले भन्नुभयो । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर नक्सा जारी गरेपछि यहाँका बासिन्दा पनि नेपालकै भूमि भएर आवत–जावत गर्न पाए भन्नेमा छन् ।
व्यासीहरु हरेक वर्ष छ महिना व्यास र छ महिना सदरमुकाम खलंगा बस्ने गर्छन् । अहिले व्यासको छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्मसमेत बसेको छ । बाटो नभएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले नेपालकै बाटो भएर खाद्यान्न ढुवानी गर्न हेलिकप्टर कुर्नुपरेको छ । रासस
आश्विन १०, २०७७ शनिवार २०:१७:५७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - कैलालीमा एक सशस्त्र प्रहरी जवान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । मृत फेला पर्नेमा सुर्खेत घर भएका २२ वर्षीय कुमार तारु मगर रहेका छन् ।
उनी सशस्त्र प्रहरी गण धनगढीको जुगेडामा कार्यरत रहेका थिए । उनी आज बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका १४ को खुटिया खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शुक्रबार साझँदेखी हराएका उनलाई खोजी गर्ने क्रममा खुटिया खोलामा मृत फेला परिएको हो । उनी अफिसबाट बाहिर जान्छु निस्किएको र फर्केर नआएपछि खोजी शुरु गरिएको थियो । उनको शरिरमा कुनै चोट नदेखिएको जनाइएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १८:१९:२५ बजे : प्रकाशित
# सशस्त्र प्रहरी
# मृत फेला
बागलुङ – कोरोना महाव्याधि नभएको भए यतिबेला गायक रामजी नेपाली देशदेशावर यात्रारत हुनुहुन्थ्यो । चीनको वुहानबाट कोरोनाभाइरसको फैलावट बढ्दै जाँदा उहाँको विश्वयात्रा भने अपर्झट रोकियो । भारतका सात प्रान्त घुमेर बङ्गलादेश जाने क्रममा गत पुसमा सिलुगढीबाट नेपाल फर्किनुप¥यो ।
विभिन्न २५ देशका राष्ट्रगान गाउँदै सन् २०१५ देखि विश्वयात्रामा निस्कनुभएका उहाँको यस वर्ष बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्सलगायतका देश पुग्ने योजना थियो । कोरोनाले निम्त्याएको विषम स्थितिका कारण उहाँको विश्वयात्रा अहिले स्थगनमा छ, फेरि कहिले शुरु हुन्छ ठेगान छैन ।
बागलुङ नगरपालिका–६ भीरलाङ्खुरीका ४१ वर्षीय उहाँको सन् २०२५ भित्र १९४ देशका राष्ट्रगान गाउने र विश्वका २३२ वटै देशमा पुग्ने लक्ष्य थियो । कोरोनाकै कारण अब यात्राको त्यो योजना र लक्ष्य पछि धकेलिने निश्चित छ । ‘विश्व बन्धुत्व, सांस्कृतिक पर्यटन र सद्भावना’को सन्देशसहित उहाँ विश्वयात्रामा हुनुहुन्थ्यो ।
“स्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि मैले कुनै तनाव लिइनँ, यो समयको मैले राम्रो सदुपयोग गरेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले म ६५ देशका राष्ट्रगान गाउन सक्ने भएँ, आउँदो डेढ÷दुई वर्षभित्र १९४ देशकै राष्ट्रगान गाउँछु ।” नेपालीले अहिले पूर्वी युरोपेली देश अलबानियाको राष्ट्रगान सिकिरहनुभएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समय सिर्जना र साधनामा बिताएको उहाँले सुनाउनुभयो । यसबीचमा नेपालीले बागलुङ र म्याग्दीका कैँयन नयाँ ठाउँको घुमफिरसमेत गर्नुभयो । यात्राका क्रममा नेपालीले नै पहिलोपटक पहिचान गर्नुभएको बागलुङ नगरपालिका–७ र ६ को सीमास्थित ‘बुद्ध हिल’ अहिले पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा चिनिन थालेको छ ।
भाइचारा र सद्भावनाको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रगान गाउँदै विश्वयात्रामा हिँडेको नेपालीले बताउनुभयो । “सानैदेखि केही न केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी चल्थ्यो, त्यसकै उपज हो यो विश्वयात्रा पनि”, उहाँले भन्नुभयो । ‘विश्वयात्रा’को समापन सगरमाथा आधार शिविरमा गर्ने नेपालीको सपना छ । हालसम्म उहाँले भारत, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन र नेदरल्याण्डको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । “पहिलो विदेश यात्रा सन् २०१७ मा बेल्जियमबाट शुरु गरेँ, प्रवासी नेपालीहरुसँगको समन्वयमा युरोप पुगेँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आइफिल टावरमा पुगी फ्रान्सको राष्ट्रगान गाएको स्मरण गर्नुभयो । बेल्जियम, स्पेन र नेदरल्याण्डका विभिन्न शहर र सार्वजनिकस्थलमा समेत राष्ट्रगान गाएको नेपालीले बताउनुभयो । “जुन देश पुग्छु पहिले नेपालको राष्ट्रगान गाउँछु अनि सम्बन्धित देशको”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालीले भारत पुग्दा चेन्नइदेखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म यात्रा गर्नुभएको थियो । “भारतमा झण्डै चार महिना बिताएँ, नेपाली समुदाय रहेका धेरै ठाउँमा औपचारिक÷अनौपचारिक कार्यक्रम भए”, उहाँले भन्नुभयो, “एकै ठाउँमा चार÷पाँच वटासम्म राष्ट्रगान गाएँ ।”
बुद्ध र सगरमाथाको देशका रुपमा नेपालको चिनारी बोकेर विदेश पुग्दा गौरवबोध भएको नेपालीले सुनाउनुभयो । चाँडै स्थिति ठिकठाक भएर आफ्नो विश्वयात्रा फेरि शुरु हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ । विश्वयात्राका लागि अहिलेसम्म कतैबाट कुनै सहयोग नलिइ आफ्नै खर्चमा हिँडेको उहाँको भनाइ छ ।
“विस्तारै सहयोगको माहोल पनि बन्ला गर्दै जाऔँ, हेर्दै जाऔँ”, नेपालीले भन्नुभयो । उहाँले ‘गुगल’, ‘युट्युव’ जस्ता माध्यमबाट विभिन्न देशका राष्ट्रगान र तिनका ‘ट्र्याक’ खोज्नुहुन्छ । आवश्यक पर्दा दूतावासबाट समेत सहयोग लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । “१९४ देशकै राष्ट्रगान र तिनका ट्र्याक सङ्कलन गरिसकेको छु”, नेपालीले भन्नुभयो ।
संसारका विभिन्न भाषामा बनेका राष्ट्रगान सही ढङ्गले गाउनु चुनौतीपूर्ण विषय भएको उहाँको अनुभव छ । “सङ्गीत, भाषा, उच्चारणदेखि धेरै पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा राष्ट्रगान गाउने सक्ने हुन लामो अभ्यास र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ”, नेपालीले भन्नुभयो । उहाँले सबै भाषाका गीतलाई नेपाली रोमनमा उतारी गाउने गर्नुहुन्छ ।
यसैबीच, विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा यही असोज ११ गते गायक नेपालीले एकै मञ्चबाट ५० देशका राष्ट्रगान गाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । कोरोना सङ्कटका बेला विश्व एकता र भातृत्वको सन्देश दिने उद्देश्यले सो कार्यक्रम राखिएको आयोजक नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष दिल शिरीषले बताउनुभयो ।
नेपालीले पहिलोपटक एकै मञ्चबाट ५० देशका राष्ट्रगान गाउन लाग्नुभएको हो । यसअघि गत फागुनमा गलकोट नगरपालिका–५ टेउमामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक मूर्तिकला कार्यशालामा उहाँले नेपालसहित ११ देशका राष्ट्रगान गाउनुभएको थियो ।
नेपालीले जापान, इटाली, चीन, युक्रेन, क्यानाडा, इजरायल, ब्राजिल, फ्रान्स, ताइवान र भारतको राष्ट्रगान गाउँदा कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धित देशका मूर्तिकारहरुले आफ्नो राष्ट्रगानको सम्मान गरेका थिए । झण्डै २५ वर्ष नेपाली गीत, सङ्गीतमा बिताउनुभएका नेपालीका ‘वर्ष दिनको मेला’ (२०५३), ‘जवानीमा तानेको’ (२०५९), ‘भीरको टुनी’लगायत गीत सार्वजनिक छन् ।रासस
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १७:३८:४२ बजे : प्रकाशित
# राष्ट्रगान गाउन
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन थपिए ७ सय २४ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा ७ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएको हो ।
कोरोना संक्रमित हुनेहरुमा काठमाडौंका ५ सय ८३, भक्तपुरका ६३ र ललितपुरका ७८ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ७ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको छ। जसमा पुरुष ७९६ र महिला ४११ रहेका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७१,८२१ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ११ सय ४७ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५३ हजार १३ पुगेको छ ।
यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६७ पुगेको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १६:५१:१४ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन १२ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण, कुन जिल्लामा कति संक्रमित ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ ।
शनिबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार नयाँ संक्रमित हुनेहरुमा झापाका ७, उदयपुरका एक, भोजपुरका २, मोरङका ७८, सुनसरीका २३, सोलुखुम्बु १, धनुषाका ४, पर्साका २४, बाराका ४, महोत्तरीका १, रौतहटका ६, सप्तरीका ११, सर्लाहीका ४, सिरहाका १, काठमाडौंका ५८३, काभ्रेका १७, चितवनका १२, दोलखाका १, धादिङका ७, नुवाकोटका २,
भक्तपुरका ६३, मकवानपुरका १७, रामेछापका ७, ललितपुरका ७८, सिन्धुपाल्चोकका ४, सिन्धुलीका १५, कास्कीका १०, गोरखाका ३, तनहुँका ४, नवलपरासी पुर्वका १, लमजुङका १, बागलुङका १, स्याङजाका ४, अर्घाखाँचीका २, कपिलवस्तुका ३, गुल्मीका ५, दाङका २८, नवलपरासीका १०, पाल्पाका ३, प्युठानका ५, बर्दियाका ७, बाँकेका ३०, रुपन्देहीका ७३, रोल्पाका ६, सल्यानका १, अछामका १३, कन्चनपुरका १, डोटीका १५, दार्चुलाका ५, बझाङका २ र बैतडीका एक जना रहेका छन् ।
जसमा पुरुष ७९६ र महिला ४११ रहेका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ७१,८२१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ११ सय ४७ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५३ हजार १३ पुगेको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १६:२८:०४ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ११ सय ४७ जनाले जिते कोरोना
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसलाई जित्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ११ सय ४७ जनाले कोरोनाभाइरसलाई जितेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शनिबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११ सय ४७ ले कोरोनालाई जितेको जानकारी दिए ।
आजसम्म डिस्चार्ज हुने ७३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या ५३ हजार १३ जना पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ७१,८२१ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६७ पुगेको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १६:२०:४३ बजे : प्रकाशित